१० रुपैयाँमै भरपेट खाना ! - Everest Dainik - News from Nepal
१० रुपैयाँमै भरपेट खाना !
काठमाडौंः छोरो बिरामी भएपछि उदयपुरका टेकबहादुर बस्नेत काठमाडौं आएको दुई साता भयो।
गंगालाल राष्ट्रिय हृदय रोग केन्द्रले उनका छोरा कुलदीपलाई चार दिनअघि पाटन अस्पतालमा ‘रिफर’ गर्यो । आइतबार बिहान ११ बजेतिर खाना खान अस्पतालबाहिर निस्किए।
बिरामी छोरालाई पनि खाना ल्याउन उनले हातमा ‘हटकेस’ बोकेका थिए । होटल जाँदै गर्दा एक युवाले सञ्चयकोष भवनको आँगनमा खाना खान बोलाए।
उनी जाने कि नजाने अलमलमा परे। अनि सोध, ‘बिरामीलाई पनि खाना लैजान पाइन्छ रु’ खाना वितरणमा बसेका स्वयंसेवकले बिरामीलाई पनि लैजान दिने बताएपछि बस्नेत खाना खान अघि सरे।
याे पनि पढ्नुस लकडाउनमा निःशुल्क खाना
१० रुपैयाँमा एक टपरी खाना पाइन्छ तर प्याकिङ गरेर लैजान नपाइने व्यवस्थापकको नियम छ। १० रुपैयाँ तिरेपछि खाना खुवाउन खटिएका स्वयंसेवकले उनलाई टपरी हातमा थमाए।
टपरीभरि खाना थापे । तरकारी थियो– केराउ र पनिरमा झोल राखेको । तरकारीमा मसला, पिरो र नुन कमै थियो । उनले खाना आए अनि छोरालाई हटकेसमा राखेर अस्पतालतिर लागे।
याे पनि पढ्नुस किन खाने बेलुका चाँडै खाना? जान्नुहोस् ८ कारण
‘अरू बेला एक सय २० रुपैयाँ पर्थ्यो । आज २० रुपैयाँमै दुई जनालाई पुग्यो,’ खुसी हुँदै उनले भने, ‘भाग्यमानीको भूतै कमारो । गरिबदुःखीका लागि राम्रो काम हो।’
याे पनि पढ्नुस १० रुपैयाँमै खाना!
यस्तै अस्पतालका कर्मचारी, वरिपरि पसलमा काम गर्ने व्यक्ति पनि खान खान आइपुगेका थिए । यहाँ हरेक आइतबार साढे १० देखि साढे १२ बजेसम्म १० रुपैयाँमा खाना खुवाउने व्यवस्था गरिएको छ। यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
ट्याग्स: १० रुपैयाँ, खाना, प्रिमियर इन्टरनेसनल एकेडेमी, लगनखेल